Mystery – Alpha Premium
Death on the Nile (2022) ##unicode မငျးသမီး Gal Gadot ပါဝငျထားတဲ့ `Death On The Nile´ ဆိုတဲ့ဇာတျကားသဈလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ မစ်စတာဟာကွူလီပှိုငျရော့ဟာဆိုရငျအမှုတှဖွေရှေငျးတဲ့နရောမှာဆရာတဈဆူဖွဈတဲ့ နာမညျကွီးစုံထောကျတဈယောကျဖွဈပါတယျ ဒီလိုနဲ့တဈရကျအားလပျရကျအီဂဈြနိုငျးမွဈဘကျမှာ အပနျးဖွရေငျး လူခမျြးသာတှရေဲ့မင်ျဂလာဆောငျတဈခုနဲ့ သှားတိုးပါတယျ အစောပိုငျးကွညျနူးစရာဟနျးနီးမှနျးခရီးစဉျလေးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ သတို့သမီးဖွဈသူ တနျဖိုးကွီးအမှတှေရေဲ့ဆကျခံသူအသတျခံရပွီးနောကျမှာတော့ပြျောရှငျဖှယျခရီးစဉျအဖွဈကနေ လုံးဝပွောငျးလဲသှားပါတော့တယျ ဒီလိုနဲ့အမှုဖွရှေငျးဖို့ကစုံထောကျကွီးပှိုငျရော့လကျထဲကိုရောကျလာတော့တာပေါ့ သတို့သမီးကိုလုပျကွံသတျဖွတျသူဟာပိုငျဆိုငျမှုတှကေို တပျမကျမှုကွောငျ့ပဲလား ခရီးစဉျအတှငျးရှိနသေူတှထေဲမှာတရားခံကဘယျသူလဲဆိုတာကို စုံထောကျကွီးပှိုကျရော့နဲ့အတူအဖွရှောရငျးကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi မင်းသမီး Gal Gadot ပါဝင်ထားတဲ့ `Death On The Nile´ ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မစ္စတာဟာကြူလီပွိုင်ရော့ဟာဆိုရင်အမှုတွေဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီးစုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်အားလပ်ရက်အီဂျစ်နိုင်းမြစ်ဘက်မှာ အပန်းဖြေရင်း လူချမ်းသာတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုနဲ့ သွားတိုးပါတယ် အစောပိုင်းကြည်နူးစရာဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်လေးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သတို့သမီးဖြစ်သူ တန်ဖိုးကြီးအမွေတွေရဲ့ဆက်ခံသူအသတ်ခံရပြီးနောက်မှာတော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးစဉ်အဖြစ်ကနေ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့အမှုဖြေရှင်းဖို့ကစုံထောက်ကြီးပွိုင်ရော့လက်ထဲကိုရောက်လာတော့တာပေါ့ သတို့သမီးကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တပ်မက်မှုကြောင့်ပဲလား ခရီးစဉ်အတွင်းရှိနေသူတွေထဲမှာတရားခံကဘယ်သူလဲဆိုတာကို စုံထောက်ကြီးပွိုက်ရော့နဲ့အတူအဖြေရှာရင်းကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow
IMDB: 6.6/10 30,287 votes
Master (2022) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ horror movie ဇာတျကားကောငျးပဲဖွဈပွီး ဒရာမာဆနျတဲ့ ဇာတျကားမြိုးလိုလညျးပွောလိုရပါတယျ လူမြိုးခှဲခွားခွငျးခံရတဲ့ အာဖရိကနျ-အမရေိကနျ အမြိုးသမီးနှဈယောကျရဲ့ သညျးထိတျရငျဖိုဖွဈရပျတှကေိုမွငျတှရေ့မှာပါ ဒါ့အပွငျ တက်ကသိုလျမှာသရဲခွောကျခံရသလိုဖွဈနတေဲ့လူမညျးအမြိုးသမီးနှဈယောကျရဲ့နောကျကှယျက အကွောငျးတှကေိုဖျောထုတျပွသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ လူဖွူတှမြေားတဲ့ အနျကတျစတာကောလိပျမှာ လူမညျးအမြိုးသမီးပရျောဖကျဆာနဲ့ ကြောငျးသူတဈယောကျဟာ သူတို့ကိုနှိမျကွတာတှေ၊ အရေးမသှငျးခငျြကွတာတှကေိုခံစားခဲ့ရပါတယျ သူတို့ရဲ့ခံစားခကျြ၊ ဘဝဇာတျကွောငျးတှေ၊ လူဖွူတှရေဲ့ လူမညျးတှအေပျေါ အသားလှတျဖိနှိပျခငျြမှုတှကေို အသားပေးဖျောပွထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးမို့တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ horror movie ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပြီး ဒရာမာဆန်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးလိုလည်းပြောလိုရပါတယ် လူမျိုးခွဲခြားခြင်းခံရတဲ့ အာဖရိကန်-အမေရိကန် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်ရပ်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ ဒါ့အပြင် တက္ကသိုလ်မှာသရဲခြောက်ခံရသလိုဖြစ်နေတဲ့လူမည်းအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လူဖြူတွေများတဲ့ အန်ကတ်စတာကောလိပ်မှာ လူမည်းအမျိုးသမီးပရော်ဖက်ဆာနဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ကိုနှိမ်ကြတာတွေ၊ အရေးမသွင်းချင်ကြတာတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ် သူတို့ရဲ့ခံစားချက်၊ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေ၊ လူဖြူတွေရဲ့ လူမည်းတွေအပေါ် အသားလွတ်ဖိနှိပ်ချင်မှုတွေကို အသားပေးဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းမို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် Review – Hmue File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL ,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့်ဒေါင်းနည်း (အစိမ်းပြထားတာကိုကလစ်ပါ) GDtot (uc ...
Deep Water (2022) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ နာမညျကွီးမငျးသား Ben Affleck၊ မငျးသမီး Ana de Armasတို့အပွငျ မငျးသားခြောလေး Jacobကပါ ဧညျ့သရုပျဆောငျအနနေဲ့ပါဝငျထားတဲ့ psychological thriller ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ ဝတ်တုကို ဇာတျကားအဖွဈပွနျလညျဖနျတီးထားတာပဲဖွဈပွီး မတ်ေတာမပါတော့တဲ့အိမျထောငျရေးတဈခု လမျးမှားကိုရောကျရာက ကွီးမားတဲ့ပွဿနာတှေ၊ လူသတျမှုတှအေထိပါ ဦးတညျသှားခဲ့တာကို ဒီဇာတျကားမှာမွငျတှရေ့မှာပါ ဖောကျပွနျတတျတဲ့ဇနီးဖွဈသူ မာလငျဒါကို သိပျခဈြတဲ့ဗဈဆိုတဲ့လူတဈယောကျဟာ သူ့ဇနီးနဲ့ကှာရှငျးရမှာ ကိုကွောကျလို့ သူ့ရှမှေ့ာတငျ အခွားယောကျြားတှနေဲ့ သူ့မိနျးမ အီစီကလီလုပျနလေညျးလှတျထားပေးခဲ့ပါတယျ မာလငျဒါကတော့ ယောကျြားအပျေါမှာမတ်ေတာကုနျခနျးနတေဲ့အပွငျဘဝကွီးကိုပဈလတျစခတျ နထေိုငျဖွတျသနျးနတေဲ့မိနျးမတဈယောကျလို့ပွောလို့ရပါတယျ မာလငျဒါရဲ့ဇယားတှေ၊အရူပျတှကေို ဗဈသညျးခံပေးခဲ့ပမေယျ့ ဇနီးကိုသိပျခဈြတဲ့အခဈြကွောငျ့ သဝနျတိုစိတျကတော့ဖွဈမိတာပေါ့ ဒါပမေယျ့ မိနျးမကိုသိပျခဈြတဲ့သူဟာ ကိုယျ့မိနျးမကိုယျအပွဈမတငျဘဲ သူ့မိနျးမနဲ့ဖောကျပွနျတဲ့ ယောကျြားတှကေိုအပွဈတငျမုနျးတီးခဲ့ပါတယျ ဒီလိုနဲ့ ဗဈတဈယောကျရဲ့အမုနျးတရားတှကေ သူ့ကို လူသတျသမားအဖွဈပွောငျးလဲပေးလိုကျတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈလာမလဲ ဒီဇာတျကားမှာ သညျးထိတျရငျဖို့စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈလို့တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသား Ben Affleck၊ မင်းသမီး Ana de Armasတို့အပြင် မင်းသားချောလေး Jacobကပါ ဧည့်သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ psychological thriller ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် ဝတ္တုကို ဇာတ်ကားအဖြစ်ပြန်လည်ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပြီး မေတ္တာမပါတော့တဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု လမ်းမှားကိုရောက်ရာက ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေ၊ လူသတ်မှုတွေအထိပါ ဦးတည်သွားခဲ့တာကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူ မာလင်ဒါကို သိပ်ချစ်တဲ့ဗစ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဇနီးနဲ့ကွာရှင်းရမှာ ကိုကြောက်လို့ သူ့ရှေ့မှာတင် အခြားယောက်ျားတွေနဲ့ သူ့မိန်းမ ...
No Exit (2022) ##unicode မူးယဈဆေးဖွတျဖို့ ဆေးရုံတကျနရေတဲ့ ဒါဘီဆိုတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျဆီကို တဈနမှေ့ာတော့သူ့အမဆေေးရုံတကျနရေကွောငျး ဖုနျးဝငျလာပါတယျ ဆေးရုံကနထှေကျမရတဲ့ ဒါဘီဟာသူ့အမကေိုတှခေ့ငျြလှနျးလို့ ထှကျပွေးလာရငျးလမျးမှာ နှငျးမုနျတိုငျးကွီးတဈခုနဲ့ ကွုံရပါတော့တယျ မုနျတိုငျးကွောငျ့ရှဆေ့ကျသှားမရတော့တဲ့ ဒါဘီဟာ လမျးကွုံတဈနရောမှာဝငျအနားယူရပါတော့တယျ ဒါပမေဲ့သူတဈယောကျတညျးမဟုတျပဲ တခွားသူလေးယောကျနဲ့ပါ သူတို့ငါးယောကျသားဂိမျးတှဆေော့၊အခြိနျကုနျမွနျအောငျတူတူနနေရေငျးနဲ့ဆိုငျအပွငျဖကျမှာ ဖုနျးလိုငျးမိတဲ့နရောလိုကျရှာနတေဲ့ဒါဘီဟာ တခွားသူတဈယောကျရဲ့ကားပျေါမှာ နောကျထပျလူတဈယောကျနဲ့ မထငျမှတျပဲဆုံတှလေို့ကျရပါတယျ အဲ့ဒီနောကျပိုငျးမှာတော့သူကကားပျေါဘယျလိုရောကျနလေဲ၊ သူမနဲ့အတူရှိနတေဲ့တခွားခရီးသှားတှရေဲ့သရုပျမှနျကဘာလဲ၊ ဘယျသူတှကေဒီကိစ်စထဲမှာပါဝငျပတျသကျနလေဲဆိုတာကို ဒါဘီတဈယောကျအန်တရာယျတှကွေားကနအေရှုပျထုပျတှကေိုဖွရှေငျးရပါတော့တယျ ဇာတျကားစစခငျြးကတညျးက ဇာတျကောငျတှရေဲ့အားပွိုငျမူတှကေိုအမြားအပွားကွညျ့ရမဲ့ ရုပျရှငျတဈကားဖွဈပွီး ကွညျ့နရေငျးတနျးလနျးလညျး ဝိုးခနဲဖွဈသှားစမေဲ့ဇာတျဝငျခနျးတှေ အမြားကွီးပါဝငျပါတယျ ဇာတျကားကပငျြးစရာကောငျးသလိုလိုနဲ့တောကျလြှောကျ ဇာတျရှိနျမွငျ့လာပွီး နောကျဆုံးဇာတျရှိနျအမွငျ့ဆုံးနရောကိုလညျး‌ကနြေပျစရာကောငျးလောကျအောငျ ကွညျ့ကွရမှာပါ သှေးသံရဲရဲဇာတျဝငျခနျးတှေ၊အသကျရှငျနိုငျဖို့ရုနျးကနျကွိုးစားကွသူတှေ၊ စိတျထဲမှာအကောငျးနဲ့အဆိုးနဲ့လှနျဆှဲနသေူတှစေတာတှကေိုအမြားကွီးမွငျရမဲ့ ရုပျရှငျကားဖွဈပါတယျ။နိုငျငံတကာက Rating တှကေလညျးတျောတျောလေးကောငျးတဲ့ Rating တှကေို ရရှိထားတာမလို့ကွညျ့ရှူသငျ့တဲ့ရုပျရှငျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ##zawgyi မူးယစ်ဆေးဖြတ်ဖို့ ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ ဒါဘီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီကို တစ်နေ့မှာတော့သူ့အမေဆေးရုံတက်နေရကြောင်း ဖုန်းဝင်လာပါတယ် ဆေးရုံကနေထွက်မရတဲ့ ဒါဘီဟာသူ့အမေကိုတွေ့ချင်လွန်းလို့ ထွက်ပြေးလာရင်းလမ်းမှာ နှင်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုနဲ့ ကြုံရပါတော့တယ် မုန်တိုင်းကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားမရတော့တဲ့ ဒါဘီဟာ လမ်းကြုံတစ်နေရာမှာဝင်အနားယူရပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ တခြားသူလေးယောက်နဲ့ပါ သူတို့ငါးယောက်သားဂိမ်းတွေဆော့၊အချိန်ကုန်မြန်အောင်တူတူနေနေရင်းနဲ့ဆိုင်အပြင်ဖက်မှာ ဖုန်းလိုင်းမိတဲ့နေရာလိုက်ရှာနေတဲ့ဒါဘီဟာ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ကားပေါ်မှာ နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်နဲ့ မထင်မှတ်ပဲဆုံတွေ့လိုက်ရပါတယ် အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူကကားပေါ်ဘယ်လိုရောက်နေလဲ၊ သူမနဲ့အတူရှိနေတဲ့တခြားခရီးသွားတွေရဲ့သရုပ်မှန်ကဘာလဲ၊ ဘယ်သူတွေကဒီကိစ္စထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာကို ဒါဘီတစ်ယောက်အန္တရာယ်တွေကြားကနေအရှုပ်ထုပ်တွေကိုဖြေရှင်းရပါတော့တယ် ဇာတ်ကားစစချင်းကတည်းက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့အားပြိုင်မူတွေကိုအများအပြားကြည့်ရမဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပြီး ကြည့်နေရင်းတန်းလန်းလည်း ဝိုးခနဲဖြစ်သွားစေမဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ် ဇာတ်ကားကပျင်းစရာကောင်းသလိုလိုနဲ့တောက်လျှောက် ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာပြီး နောက်ဆုံးဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုလည်း‌ကျေနပ်စရာကောင်းလောက်အောင် ကြည့်ကြရမှာပါ သွေးသံရဲရဲဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်ကြိုးစားကြသူတွေ၊ စိတ်ထဲမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့လွန်ဆွဲနေသူတွေစတာတွေကိုအများကြီးမြင်ရမဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာက Rating တွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ Rating တွေကို ရရှိထားတာမလို့ကြည့်ရှူသင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Review – Aung Pyae Sone File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard ...
Ghosts of the Ozarks (2022) ##unicode ဒီတဈခါ တငျဆကျပေးထားတဲ့ဇာတျကားကတော့ လြှို့ဝှကျသညျးဖိုကွညျ့ရှုရမဲ့ "Ghosts of the Ozarks"လို့ချေါတဲ့ အင်ျဂလိပျဇာတျကားလေးတဈကားပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့..... ဂြိမျးဈလို့ချေါတဲ့ဆရာဝနျတဈယောကျဟာ ဦးလေးဖွဈသူရဲ့ချေါဆိုမှုကွောငျ့ မွို့လေးတဈမွို့ကိုရောကျလာရပါတယျ။ ဦးလေးဟာ သူ့ကို မွို့မှာဆရာဝနျတဈယောကျအနနှေငျ့ အားကိုးခငျြသညျ့အတှကျ ချေါလိုကျခွငျးဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး မွို့လေးဟာ သာမနျမွို့တဈမွို့မဟုတျဘဲ ထိတျလနျ့ဖှယျရာတှေ၊ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျတညျရှိမှုတှနေဲ့ဖွဈတညျနတောကို သူဟာ သိရှိလိုကျရပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျ ဂြိမျးဈဟာ မြှျောလငျ့မထားတဲ့လြှို့ဝှကျခကျြတှကေိုပါသိရှိလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့ ကွုံတှလေ့ာရတဲ့အန်တရာယျတှကေို သူ ဘယျလိုရငျဆိုငျကြျောဖွတျသှားမလဲ၊ မွို့မှာကရြောကျလာတဲ့အန်တရာယျတှကေိုရော တားဆီးနိုငျပါ့မလားဆိုတာ ဇာတျလမျးထဲမှာ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစှာနဲ့ ကွညျ့ရှုရမှာပါ။ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျ၊ သညျးထိတျရငျဖိုဇာတျကားတှကေို ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျလညျး အကွိုကျတှစေ့မေဲ့ဇာတျကားတဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ လကျမလှတျတမျးကွညျ့ရှုလိုကျကွပါ။ ##zawgyi ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ လျှို့ဝှက်သည်းဖိုကြည့်ရှုရမဲ့ "Ghosts of the Ozarks"လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့..... ဂျိမ်းစ်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကြောင့် မြို့လေးတစ်မြို့ကိုရောက်လာရပါတယ်။ ဦးလေးဟာ သူ့ကို မြို့မှာဆရာဝန်တစ်ယောက်အ​​နေနှင့် အားကိုးချင်သည့်အတွက် ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မြို့လေးဟာ သာမန်မြို့တစ်​မြို့မဟုတ်ဘဲ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တည်ရှိမှုတွေနဲ့  ဖြစ်တည်နေတာကို သူဟာ သိရှိလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဂျိမ်းစ်ဟာ မျှော်လင့်မထားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပါသိရှိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အန္တရာယ်​တွေကို သူ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သွားမလဲ၊ မြို့မှာကျရောက်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရော တားဆီးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ...
IMDB: 4.7/10 94 votes
36 Farmhouse (2022) ##unicode လောဘကိုအတောမသတျနိုငျသေးတဲ့လူခမျြးသာတှေ၊ သူဌေးတှဆေီကအခှငျ့ကောငျးယူခိုးဖို့ကွံနတေဲ့ လူဆငျးရဲတှေ 360 Farmhouseဆိုတဲ့ နနျးတျောလိုစံအိမျကွီးမှာလာဆုံတဲ့အခါ ဘယျလိုဇာတျလမျးတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာမွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ဟာသဇာတျလမျးဖွဈပွီး လှညျ့ကှကျတှလေညျးပါလို့ စိတျလှုပျရှားဖို့ကောငျးတဲ့ဇာတျကားလို့လညျးပွောလို့ရပါတယျ 360 Farmhouseပိုငျရှငျ သူဌေးမကွီးရဲ့ သားအကွီးဆုံးဖွဈသူ ရိုနကျချဟာ အမအေ့မှတှေကေို သူတဈယောကျတညျးလကျဝါးကွီးအုပျခငျြခဲ့ပါတယျ ဒါကို ကနျြတဲ့ညီနှဈယောကျကသဘောမတူပါဘူး အမကေိုတော့တူတူမစောငျ့ရှောကျခငျြဘဲ အမအေ့မှကေိုတော့တနျးတူညီမြှလိုခငျြခဲ့ပါတယျ သူဌေးမကွီးက စီးပှားပကျြသှားခဲ့တဲ့သားအကွီးကိုသနားပွီး သတေမျးစာထဲမှာ သူ့ကိုအမှပေေးမယျလို့ရေးထားတာကိုသိတဲ့အခါမှာ ညီနှဈယောကျဟာ တရားဥပဒအေရလုပျမယျဆိုပွီး ရှနေ့ကေိုလှတျခဲ့ပါတယျ အဲဒီရှနေ့ကေို လောဘဇောတှတေိုကျနတေဲ့ ရိုနကျချက သတျလိုကျတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုပွဿနာတှဆေကျဖွဈလာမလဲ တဈဖကျမှာလညျး ဆငျးရဲတဲ့ဟာရီနဲ့ သူ့အဖဟော 360 Farmhouseကိုရောကျလာပါတယျ ဟာရီကတော့ သူဌေးမကွီးရဲ့တဈဦးတညျးသောမွေးမလေးကိုသိုကျတူးဖို့ကွံနပွေီး သူ့အဖကေတော့ သူဌေးမကွီးရဲ့စိနျတှကေိုခိုးဖို့ကွံနခေဲ့တာပါ ဒီလိုမြိုး လောဘကွောငျ့ဖွဈပျေါလာခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ဇာတျလမျးကို ဒီဇာတျကားမှာမွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈလို့ကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi လောဘကိုအတောမသတ်နိုင်သေးတဲ့လူချမ်းသာတွေ၊ သူဌေးတွေဆီကအခွင့်ကောင်းယူခိုးဖို့ကြံနေတဲ့ လူဆင်းရဲတွေ 360 Farmhouseဆိုတဲ့ နန်းတော်လိုစံအိမ်ကြီးမှာလာဆုံတဲ့အခါ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး လှည့်ကွက်တွေလည်းပါလို့ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် 360 Farmhouseပိုင်ရှင် သူဌေးမကြီးရဲ့ သားအကြီးဆုံးဖြစ်သူ ရိုနက်ခ်ဟာ အမေ့အမွေတွေကို သူတစ်ယောက်တည်းလက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်ခဲ့ပါတယ် ဒါကို ကျန်တဲ့ညီနှစ်ယောက်ကသဘောမတူပါဘူး အမေကိုတော့တူတူမစောင့်ရှောက်ချင်ဘဲ အမေ့အမွေကိုတော့တန်းတူညီမျှလိုချင်ခဲ့ပါတယ် သူဌေးမကြီးက စီးပွားပျက်သွားခဲ့တဲ့သားအကြီးကိုသနားပြီး သေတမ်းစာထဲမှာ သူ့ကိုအမွေပေးမယ်လို့ရေးထားတာကိုသိတဲ့အခါမှာ ညီနှစ်ယောက်ဟာ တရားဥပဒေအရလုပ်မယ်ဆိုပြီး ရှေ့နေကိုလွှတ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီရှေ့နေကို လောဘဇောတွေတိုက်နေတဲ့ ရိုနက်ခ်က သတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ တစ်ဖက်မှာလည်း ဆင်းရဲတဲ့ဟာရီနဲ့ သူ့အဖေဟာ 360 Farmhouseကိုရောက်လာပါတယ် ဟာရီကတော့ သူဌေးမကြီးရဲ့တစ်ဦးတည်းသောမြေးမလေးကိုသိုက်တူးဖို့ကြံနေပြီး သူ့အဖေကတော့ သူဌေးမကြီးရဲ့စိန်တွေကိုခိုးဖို့ကြံနေခဲ့တာပါ ...
Kakegurui 2: Ultimate Russian Roulette (2021) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ Kakegurui season2ကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဒီကားလေးဟာဆိုရငျဂပြနျနိုငျငံရဲ့ manga seriesတဈခုကိုပွနျလညျရိုကျကူးပုံဖျောထားတာဖွဈပွီးတော့ ပရိသတျမြားရဲ့စိတျဝငျစားမှုနှဈခွိုကျမှုတှကေို season 1ကတညျးကအပိုငျသိမျးထားနိုငျခဲ့တဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ဒီအပိုငျးမှာတော့ဂြာဘာမီယူမီကိုဟာရာကူသငျတနျးကြောငျးမှာလောငျးကစားအတျောဆုံးကြောငျးသူဖွဈလာခဲ့ပွီးတော့ ကြောငျးသားကောငျစီအဖှဲ့ဝငျတှဟောလညျးသူတို့ရဲ့နရောမတညျမွဲမှာကို စိုးရိမျလာကွပါတယျ ဒါကွောငျ့ဂြာဘာမီယူမီကိုကိုအနိုငျယူပွီးအပွတျရှငျးနိုငျမယျ့ရှီကီဂါမီကိုဆငျ့ချေါလိုကျကွပါတယျ ရှီကီဂါမီဟာလှနျခဲ့တဲ့ ၂နှဈလောကျကကြောငျးကနထေုတျပယျခံခဲ့ရတဲ့သူဖွဈပွီးအခုခြိနျမှာတော့လောငျးကစားလုပျတဲ့ နရောမှာတဈဖကျကမျးခတျကြှမျးကငျြတဲ့သူဖွဈနပေါတယျ ဒီလိုနဲ့လောငျးကစားဘုရငျမလို့ချေါရလောကျအောငျ ကြှမျးကငျြတဲ့ဂြာဘာမီယူမီကိုနဲ့ပှဲတိုငျးအနိုငျယူထားနိုငျတဲ့ရှီကီဂါမီကွားမှာလောငျးကစားစိနျချေါပှဲ တဈခုပျေါပေါကျလာပါတော့တယျ ဒီပှဲမှာဂြာဘာမီယူမီကိုကပဲအနိုငျကိုထိနျးသိမျးထားနိုငျမလား ရှီကီဂါမီကပဲဂြာဘာမီကိုအလဲထိုးနိုငျသှားမလားဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Kakegurui season2ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးဟာဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ manga seriesတစ်ခုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ပရိသတ်များရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှစ်ခြိုက်မှုတွေကို season 1ကတည်းကအပိုင်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဒီအပိုင်းမှာတော့ဂျာဘာမီယူမီကိုဟာရာကူသင်တန်းကျောင်းမှာလောင်းကစားအတော်ဆုံးကျောင်းသူဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ ကျောင်းသားကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့နေရာမတည်မြဲမှာကို စိုးရိမ်လာကြပါတယ် ဒါကြောင့်ဂျာဘာမီယူမီကိုကိုအနိုင်ယူပြီးအပြတ်ရှင်းနိုင်မယ့်ရှီကီဂါမီကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ကြပါတယ် ရှီကီဂါမီဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကကျောင်းကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့လောင်းကစားလုပ်တဲ့ နေရာမှာတစ်ဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်နေပါတယ် ဒီလိုနဲ့လောင်းကစားဘုရင်မလို့ခေါ်ရလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ဂျာဘာမီယူမီကိုနဲ့ပွဲတိုင်းအနိုင်ယူထားနိုင်တဲ့ရှီကီဂါမီကြားမှာလောင်းကစားစိန်ခေါ်ပွဲ တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ် ဒီပွဲမှာဂျာဘာမီယူမီကိုကပဲအနိုင်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်မလား ရှီကီဂါမီကပဲဂျာဘာမီကိုအလဲထိုးနိုင်သွားမလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Drama,Mystery,Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Kakegurui: The Movie (2019) ##unicode Kakeguruiဆိုတဲ့ manga seriesကလောငျးကစားလှမျးမိုးတဲ့အထကျတနျးကြောငျးတဈကြောငျးအကွောငျး seriesဖွဈပွီး အတျောကိုအားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ စီးရီးတဈခုပါ ဒီဇာတျကားက အဲဒီစီးရီးကို live actionရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ live actionဆိုရငျ တဈခါတဈလေ ရသပေါ့သှားတတျပမေယျ့ ဒီဇာတျကားကတော့ သရုပျဆောငျခကျြတှရေော ရိုကျခကျြတှကေပါ မူရငျး mangaကိုမှီတယျဆိုပွီးreviewကောငျးကောငျးတှရေရှိထားတာဖွဈလို့ကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားတဈကားပါပဲ ဇာတျလမျးအကဉျြးခြုပျကတော့ Hyakkaouအထကျတနျးကြောငျးက ပုဂ်ဂလိကကြောငျးဖွဈပွီး သူဌေးတှတေတျတဲ့ကြောငျးလိုပေါ့ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကြောငျးမှာက ကြောငျးသားတှကေို ဂုဏျတှေ ငှတှေနေဲ့ခှဲတာမဟုတျဘဲလောငျးကစားလုပျတာဘယျလောကျတျောလဲနဲ့အဆငျ့ခှဲတဲ့ကြောငျးတဈကြောငျးပါ ကြောငျးသားကောငျစီကတော့ အတျောဆုံးလူတှပေေါ့ လောငျးကစားလုပျလို့ရူံးတဲ့လူတှကေတော့ လူမဟုတျသလိုဆကျဆံခံရပါတယျ ကြောငျးသားကောငျစီနဲ့အပွိုငျ Villageဆိုတဲ့လောငျးကစားဆနျ့ကငျြရေး အဖှဲ့တဈခုကလညျးပျေါပေါကျလာပါတယျ ဒီလိုပွိုငျဆိုငျမှုတှကွေားထဲမှာ ကြောငျးအသဈပွောငျးလာတဲ့ ယူမီကိုကလညျး လောငျးကစားကိုနှဈသကျသူတဈယောကျဖွဈပွီး သူတို့ကြောငျးမှာ တဈကြောငျးလုံးပါဝငျမယျ့ လောငျးကစားပှဲကွီးကငျြးပတဲ့အခါဘယျလိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့လောငျးကစားတှကေိုတှမွေ့ငျရမလဲဆိုတာ စိတျလှုပျရှားဖို့ကောငျးပွီးဇာတျလမျးအဆုံးထိဆှဲချေါသှားမယျ့ဇာတျကားဖွဈလို့ကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi Kakeguruiဆိုတဲ့ manga seriesကလောင်းကစားလွှမ်းမိုးတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအကြောင်း seriesဖြစ်ပြီး အတော်ကိုအားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ စီးရီးတစ်ခုပါ ဒီဇာတ်ကားက အဲဒီစီးရီးကို live actionရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် live actionဆိုရင် တစ်ခါတစ်လေ ရသပေါ့သွားတတ်ပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားကတော့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေရော ရိုက်ချက်တွေကပါ မူရင်း mangaကိုမှီတယ်ဆိုပြီးreviewကောင်းကောင်းတွေရရှိထားတာဖြစ်လို့ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကတော့ Hyakkaouအထက်တန်းကျောင်းက ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဖြစ်ပြီး သူဌေးတွေတတ်တဲ့ကျောင်းလိုပေါ့ ဒါပေမယ့် သူတို့ကျောင်းမှာက ကျောင်းသားတွေကို ဂုဏ်တွေ ငွေတွေနဲ့ခွဲတာမဟုတ်ဘဲလောင်းကစားလုပ်တာဘယ်လောက်တော်လဲနဲ့အဆင့်ခွဲတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းပါ ကျောင်းသားကောင်စီကတော့ အတော်ဆုံးလူတွေပေါ့ လောင်းကစားလုပ်လို့ရူံးတဲ့လူတွေကတော့ လူမဟုတ်သလိုဆက်ဆံခံရပါတယ် ကျောင်းသားကောင်စီနဲ့အပြိုင် Villageဆိုတဲ့လောင်းကစားဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့တစ်ခုကလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ် ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားထဲမှာ ကျောင်းအသစ်ပြောင်းလာတဲ့ ယူမီကိုကလည်း လောင်းကစားကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကျောင်းမှာ ...
IMDB: 5.9/10 484 votes
Marakkar: Lion of the Arabian Sea (2021) ##unicode အိန်ဒိယနိုငျငံကို ၁၅၂၀-၁၆၀၀လောကျကကြူးကြျောဝငျရောကျလာတဲ့ပျေါတူဂီတှကေို ခုခံတိုကျခိုကျခဲ့တဲ့မာရာကာလေးယောကျရှိခဲ့ပါတယျ ဒီကားလေးထဲမှာတော့လေးယောကျမွောကျမာရာကာဖွဈတဲ့ ကှနျဂြာလီမာရာကာရဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံထဲကိုဝငျရောကျလာတဲ့ပျေါတူဂီတှကေိုဗြူဟာကောငျးကောငျးနဲ့ခုခံတိုကျခိုကျပုံတှကေို တငျပွထားပါတယျ ဒီကားလေးဟာဆိုရငျဆုတှလေညျးအမြားကွီးရရှိထားတာဖွဈပွီးတော့ ဝငျငှေ ၅၀၀ မီလီယံအထိရရှိထားတဲ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ကှနျဂြာလီဟာအဘိုးဖွဈသူကူတီရာလီမာရာကာရဲ့ ဦးဆောငျမှုအောကျမှာသူ့အမနေဲ့အတူအေးအေးခမျြးခမျြးနထေိုငျနတေဲ့သူဖွဈပါတယျ တဈနမှေ့ာတော့သူ့ရဲ့ခဈြသူကိုလကျထပျဖို့အတှကျသှားတဲ့လမျးမှာပဲအလဈဝငျတိုကျခိုကျခံရပွီး မိသားစုဝငျတှအေားလုံးအသတျခံလိုကျရပါတယျ တဈယောကျတညျးအသကျရှငျကနျြခဲ့တဲ့ ကှနျဂြာလီတဈယောကျသူ့ဘဝကိုဘယျလိုပွနျပွီးရပျတညျသှားမလဲ သူ့မိသားစုတှအေတှကျဘယျလိုလကျစားခသြှေားမလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ၁၅၂၀-၁၆၀၀လောက်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပေါ်တူဂီတွေကို ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မာရာကာလေးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ဒီကားလေးထဲမှာတော့လေးယောက်မြောက်မာရာကာဖြစ်တဲ့ ကွန်ဂျာလီမာရာကာရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ပေါ်တူဂီတွေကိုဗျူဟာကောင်းကောင်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ပုံတွေကို တင်ပြထားပါတယ် ဒီကားလေးဟာဆိုရင်ဆုတွေလည်းအများကြီးရရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ဝင်ငွေ ၅၀၀ မီလီယံအထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ကွန်ဂျာလီဟာအဘိုးဖြစ်သူကူတီရာလီမာရာကာရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာသူ့အမေနဲ့အတူအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်သွားတဲ့လမ်းမှာပဲအလစ်ဝင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအသတ်ခံလိုက်ရပါတယ် တစ်ယောက်တည်းအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကွန်ဂျာလီတစ်ယောက်သူ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးရပ်တည်သွားမလဲ သူ့မိသားစုတွေအတွက်ဘယ်လိုလက်စားချေသွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – hmue File Size – 1.4GB,2.8GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Action,History,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & hmue Encoded by Arrow
Detective Dee and The Red Eye (2021) (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode Detective Dee: The Sly Red-Eye (2021)ဆိုတဲ့ တရုတျကားလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဧကရီဘုရငျမဝူ အုပျစိုးစဉျကာလမှာ ထောကျလှမျးရေးအရာရှိ ဒီးရနျကြဲဟာ အသိစိတျလှတျနတေဲ့ မကျြလုံးနီသတ်တဝါတှကေို သှားရောကျစုံစမျးဖွရှေငျးဖို့ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ အမှုကို ဧကရီရဲ့မှေးနရေ့ကျမွတျမတိုငျခငျဖွရှေငျးရမှာပါ ထိုသတ်တဝါတှကေို ဒီးရနျကြဲဟာ လှနျခဲ့တဲ့ဆယျ့ငါးနှဈကလညျး ကွုံတှခေဲ့ဖူးပွီး ၊လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတှကျ စုံစမျးစဈဆေးဖို့ စိတျအားထကျသနျနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နယျနှငျဒဏျပေးခံထားရတဲ့မငျးသားရှိရာ ဖနျကြိုးကိုစုံစမျးစဈဆေးဖို့ ရောကျရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ အစောငျ့အရှောကျရှနျခငျြခငျြနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။ နောကျ...သူတို့တှအေတူတကှစုံစမျးဖို့ဖွဈလာပွီးတဲ့အခါမှာတော့ သံသယအဝငျခံရတဲ့မငျးသားကပဲ တကယျ့အပွဈသားဖွဈနမေလား ၊ရှနျခငျြခငျြရဲ့ သရုပျမှနျကရောဘာလဲ၊ ဒီးရနျကြဲရဲ့ လူတှေ ထပျပွီးဆုံးရှုံးရဦးမှာလား၊ နနျးတျောတှငျးမှာရော အန်တရာယျဆိုးတှကေရြောကျလာတာကို တားဆီးနိုငျသှားမလားဆိုတာစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမှာပါ။ Historical, Thrillerကားတှကေို ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျလညျးလုံးဝအကွိုကျတှစေ့မေဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျနျော။ ။##zawgyi Detective Dee: The Sly Red-Eye (2021)ဆိုတဲ့ တရုတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဧကရီဘုရင်မဝူ အုပ်စိုးစဉ်ကာလမှာ ​​ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ဒီးရန်ကျဲဟာ အသိစိတ်လွတ်နေတဲ့ မျက်လုံးနီသတ္တဝါ​တွေကို သွားရောက်စုံစမ်းဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အမှုကို ဧကရီရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်မတိုင်ခင်ဖြေရှင်းရမှာပါ ထိုသတ္တဝါတွေကို ဒီးရန်ကျဲဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ့်ငါးနှစ်ကလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခံထားရတဲ့မင်းသားရှိရာ ဖန်ကျိုးကိုစုံစမ်းစစ်​​​​ဆေးဖို့ ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ​တော့ အစောင့်အရှောက်ရှန်ချင်ချင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ နောက်...သူတို့တွေအတူတကွစုံစမ်းဖို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သံသယအဝင်ခံရတဲ့မင်းသားကပဲ တကယ့်အပြစ်သားဖြစ်နေမလား ၊ရှန်ချင်ချင်ရဲ့ သရုပ်မှန်ကရောဘာ​လဲ၊ ဒီးရန်ကျဲရဲ့ လူတွေ ...
IMDB: 7.2/10 785 votes
The Whole Truth (2021) ##unicode အခုတဈခါမှာတော့ထိတျလနျ့သညျးဖိုဇာတျလမျးတှကေိုမှကွညျ့ခငျြသူတှေ အကွိုကျတှစေ့မေယျ့ထိုငျး horror ကားလေးတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ပငျနဲ့ပတျတို့မောငျနှမနှဈယောကျဟာအဖမေရှိတော့ဘဲအမနေဲ့ပဲ သုံးယောကျတညျးအတူနကွေပါတယျ သူတို့အမမေိုငျကလညျးအလုပျတဈဖကျနဲ့မို့သူတို့ မောငျနှမနှဈယောကျကိုသိပျပွီးတော့ဂရုမစိုကျနိုငျပါဘူး တဈရကျမှာတော့မိုငျတဈယောကျအလုပျကနပွေနျလာရငျးကားအကျစီးဒငျ့ဖွဈပွီး ကိုမာဝငျသှားပါတယျ အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ ပငျနဲ့ပတျတို့တဈခါမှမကွားဖူးခဲ့တဲ့ သူ့အဘိုးနဲ့အဘှားဆိုသူဟာသူတို့နဲ့အတူနဖေို့လာချေါပါတော့တယျ သူတို့အမဆေေးရုံတကျနတေဲ့အခြိနျခဏပဲနမေယျဆိုပွီးအဘိုးအဘှားတှအေိမျကိုလိုကျသှားပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲထူးဆနျးတဲ့အဖွဈအပကျြတှကေိုစပွီးကွုံတှရေ့ပါတော့တယျ ညဘကျတှအေသံဆူဆူညံညံတှကွေားရတာမြိုးတှလေညျးရှိပွီးသူ့အဘိုးအဘှားတှဆေိုသူတှကေလညျး ထူးဆနျးနတောကိုတှရေ့ပါတော့တယျ ပငျနဲ့ပတျတို့မောငျနှမနှဈယောကျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ထူးဆနျးတဲ့ဖွဈရပျတှရေဲ့နောကျကှယျက အမှနျတရားကဘာလဲ သူတို့အဘိုးအဘှားတှကေရောဘယျလိုလြှို့ဝှကျခကျြတှရှေိနတောလဲဆိုတာကို ခွောကျခွားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးဖွဈလို့ကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ။##zawgyi အခုတစ်ခါမှာတော့ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်လမ်းတွေကိုမှကြည့်ချင်သူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ထိုင်း horror ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ပင်နဲ့ပတ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာအဖေမရှိတော့ဘဲအမေနဲ့ပဲ သုံးယောက်တည်းအတူနေကြပါတယ် သူတို့အမေမိုင်ကလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့သူတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုသိပ်ပြီးတော့ဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူး တစ်ရက်မှာတော့မိုင်တစ်ယောက်အလုပ်ကနေပြန်လာရင်းကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ကိုမာဝင်သွားပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ပင်နဲ့ပတ်တို့တစ်ခါမှမကြားဖူးခဲ့တဲ့ သူ့အဘိုးနဲ့အဘွားဆိုသူဟာသူတို့နဲ့အတူနေဖို့လာခေါ်ပါတော့တယ် သူတို့အမေဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်ခဏပဲနေမယ်ဆိုပြီးအဘိုးအဘွားတွေအိမ်ကိုလိုက်သွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုစပြီးကြုံတွေ့ရပါတော့တယ် ညဘက်တွေအသံဆူဆူညံညံတွေကြားရတာမျိုးတွေလည်းရှိပြီးသူ့အဘိုးအဘွားတွေဆိုသူတွေကလည်း ထူးဆန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ် ပင်နဲ့ပတ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က အမှန်တရားကဘာလဲ သူတို့အဘိုးအဘွားတွေကရောဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတာကို ခြောက်ခြားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Horror, Drama,Mystery Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 5.1/10 785 votes
Rose Plays Julie (2019) (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ horror thrillerဇာတျကားကောငျးဖွဈပွီး Game of thronesထဲက Little Fingerသရုပျဆောငျ Aidan Gillenပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးပဲဖွဈပါတယျ ရိုဈဆိုတဲ့မိနျးကလေးက တိရစ်ဆာနျကုဆေးပညာအကွောငျးလလေ့ာနတေဲ့ တိကုဆရာဝနျလောငျးတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ မိဘမဲ့တဈယောကျဖွဈပွီး ငယျငယျကတညျးကမှေးစားခံခဲ့ရတဲ့သူဟာ သူ့အမနေဲ့ပွနျတှရေ့ငျ ဘယျလိုလေးဖွဈနမေလဲ ဘာကွောငျ့သူ့ကို သူ့အမကေစှနျ့ပဈခဲ့တာလဲလိုအမွဲစဉျးစားနခေဲ့မိပါတယျ တဈနေ့ သူ့ကိုစှနျ့ပဈသှားခဲ့တဲ့အမရေဲ့အိမျနဲ့ဖုနျးကိုသိလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့ ဖုနျးဆကျပွီးအိမျထိလိုကျသှားခဲ့ပါတယျ သူ့အမနေဲ့သှားတှတေဲ့အခါမှာ သူ ဘာကွောငျ့စှနျ့ပဈခံခဲ့ရတယျဆိုတဲ့အကွောငျးရငျးကိုသိခဲ့ရပါတယျ မုဒိနျးကငျြ့မှုကွောငျ့မှေးဖှားလာခဲ့ရတဲ့ရိုဈဟာ ဖခငျဖွဈသူကိုနာကညျြးစိတျလကျစားခလြေိုစိတျတှနေဲ့ ဘာတှဆေကျလုပျမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဇာတျကားမှာစိတျလှုပျရှားဖှယျမွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈလို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ။##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ horror thrillerဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပြီး Game of thronesထဲက Little Fingerသရုပ်ဆောင် Aidan Gillenပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ရိုစ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးက တိရစ္ဆာန်ကုဆေးပညာအကြောင်းလေ့လာနေတဲ့ တိကုဆရာဝန်လောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းကမွေးစားခံခဲ့ရတဲ့သူဟာ သူ့အမေနဲ့ပြန်တွေ့ရင် ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေမလဲ ဘာကြောင့်သူ့ကို သူ့အမေကစွန့်ပစ်ခဲ့တာလဲလိုအမြဲစဉ်းစားနေခဲ့မိပါတယ် တစ်နေ့ သူ့ကိုစွန့်ပစ်သွားခဲ့တဲ့အမေရဲ့အိမ်နဲ့ဖုန်းကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ဖုန်းဆက်ပြီးအိမ်ထိလိုက်သွားခဲ့ပါတယ် သူ့အမေနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာ သူ ဘာကြောင့်စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ် မုဒိန်းကျင့်မှုကြောင့်မွေးဖွားလာခဲ့ရတဲ့ရိုစ်ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူကိုနာကျည်းစိတ်လက်စားချေလိုစိတ်တွေနဲ့ ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဇာတ်ကားမှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre :Mystery, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & ...
IMDB: 6.5/10 780 votes
Last Night in Soho (2021) ##unicode Peaky blindersနဲ့ The Queen’s Gambit နာမညျကွီးဇာတျလမျးတှဲတှထေဲက မငျးသမီးခြော Anya Taylorရဲ့နောကျဆုံးထှကျဇာတျကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ Psychological horrorကားဖွဈပွီး UK accentတှနေဲ့ကွညျ့ရူရမယျ့ အမိုကျစားဇာတျကားကောငျးပါ တောကနေ လနျဒနျကို ဒီဇိုငျနာပညာသငျဖို့ရောကျလာခဲ့တဲ့ အယျလီဆိုတဲ့ကောငျမလေးဟာ လနျဒနျမွို့ကွီးရဲ့ခတျေဆနျမှုတှနေဲ့အသားမကခြဲ့ပါဘူး အယျလီက ၁၉၆၀ခုနှဈဖကျရှငျတှေ သီခငျြးတှကေိုနှဈသကျတဲ့အတှကျ အခုခတျေလူငယျတှနေဲ့ပေါငျးသငျးရတာ သူ့အတှကျအဆငျမပွဖွေဈခဲ့ပါဘူး ၁၉၆၀ခုနှဈစတိုငျတှကေိုသိပျကွိုကျတဲ့အယျလီဟာ အဲဒီခတျေမှာ သူ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈနတေယျဆိုပွီးစိတျကူးယဉျခဲ့ပါတယျ သူ့ရဲ့စိတျကူးယဉျတှကေ အပွငျမှာလကျတှဖွေ့ဈနသေလိုခံစားလာရတဲ့အခါ အိပျမကျတှလေား လကျတှဖွေ့ဈနတောလား သူ့အတှကျဇဝဇေဝါဖွဈခဲ့ပါတယျ သူ့ရဲ့စိတျကူးထဲမှာ အန်တရာယျတှကွေုံတှလေ့ာရတဲ့အခါမှာလညျး အပွငျလကျတှမှေ့ာရော သူ ဘေးအန်တရာယျတှကွေုံတှရေ့မှာလား သညျးထိတျရငျဖိုစောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ဇာတျကားကောငျးဖွဈလို့ လကျမလှတျတမျးကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi Peaky blindersနဲ့ The Queen’s Gambit နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲက မင်းသမီးချော Anya Taylorရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Psychological horrorကားဖြစ်ပြီး UK accentတွေနဲ့ကြည့်ရူရမယ့် အမိုက်စားဇာတ်ကားကောင်းပါ တောကနေ လန်ဒန်ကို ဒီဇိုင်နာပညာသင်ဖို့ရောက်လာခဲ့တဲ့ အယ်လီဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ လန်ဒန်မြို့ကြီးရဲ့ခေတ်ဆန်မှုတွေနဲ့အသားမကျခဲ့ပါဘူး အယ်လီက ၁၉၆၀ခုနှစ်ဖက်ရှင်တွေ သီချင်းတွေကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက် အခုခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းရတာ သူ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ၁၉၆၀ခုနှစ်စတိုင်တွေကိုသိပ်ကြိုက်တဲ့အယ်လီဟာ အဲဒီခေတ်မှာ သူ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်တွေက အပြင်မှာလက်တွေ့ဖြစ်နေသလိုခံစားလာရတဲ့အခါ အိပ်မက်တွေလား လက်တွေ့ဖြစ်နေတာလား သူ့အတွက်ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာ အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာလည်း အပြင်လက်တွေ့မှာရော သူ ဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရမှာလား သည်းထိတ်ရင်ဖိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် Review – ...
The Fable: The Killer Who Doesn’t Kill (2021) (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode The Fable: The Killer who doesn't Kill ဆိုတဲ့ဂပြနျအကျရှငျကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ အကျရှငျကားဆိုပမေယျ့ဟာသလေးလညျးနညျးနညျးရောထားလို့ဇာတျလမျးကစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့အပွငျ တျောတျောလေးကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ ဆာတိုဟာကွေးစားလူသတျသမားဖွဈပွီးအလုပျကနခေဏလောကျအနားယူထားပါတယျ သူ့ရဲ့ပါတနာယိုကိုနဲ့အတူသရုပျမှနျကိုဖုံးကှယျပွီး Octopus ဒီဇိုငျးကုမ်ပဏီမှာအလုပျလုပျပါတယျ မစ်စတာအူဆူဘိုကတော့ NPO ဆိုတဲ့လူမှုအကြိုးပွုအဖှဲ့ကိုတညျထောငျပွီးကလေးတှအေကြိုးအတှကျလုပျနသေလိုနဲ့နောကျကှယျမှာတော့ လူတှကေိုလိမျညာပွီးသတျဖွတျနတေဲ့လူဆိုးတဈယောကျဖွဈပါတယျဒီလိုနဲ့တဈရကျမှာတော့အူဆူဘိုဟာ ဆာတိုတို့ရဲ့ Octopus ဒီဇိုငျးကုမ်ပဏီကဝနျထမျးတဈယောကျကိုပဈမှတျထားလာတဲ့အခြိနျမှာတော့... ဆာတိုတဈယောကျ လူဆိုးခေါငျးဆောငျအူဆူဘိုကိုဘယျလိုရှငျးထုတျသှားမလဲ သူ့ရဲ့သရုပျမှနျကိုအဆုံးထိဖုံးကှယျထားနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi The Fable: The Killer who doesn't Kill ဆိုတဲ့ဂျပန်အက်ရှင်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အက်ရှင်ကားဆိုပေမယ့်ဟာသလေးလည်းနည်းနည်းရောထားလို့ဇာတ်လမ်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပြင် တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆာတိုဟာကြေးစားလူသတ်သမားဖြစ်ပြီးအလုပ်ကနေခဏလောက်အနားယူထားပါတယ် သူ့ရဲ့ပါတနာယိုကိုနဲ့အတူသရုပ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး Octopus ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် မစ္စတာအူဆူဘိုကတော့ NPO ဆိုတဲ့လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ပြီးကလေးတွေအကျိုးအတွက်လုပ်နေသလိုနဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ လူတွေကိုလိမ်ညာပြီးသတ်ဖြတ်နေတဲ့လူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်မှာတော့အူဆူဘိုဟာ ဆာတိုတို့ရဲ့ Octopus ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုပစ်မှတ်ထားလာတဲ့အချိန်မှာတော့... ဆာတိုတစ်ယောက် လူဆိုးခေါင်းဆောင်အူဆူဘိုကိုဘယ်လိုရှင်းထုတ်သွားမလဲ သူ့ရဲ့သရုပ်မှန်ကိုအဆုံးထိဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Action,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား
The Night House (2021) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ The Night House ဆိုတဲ့ horror ကားလေးကိုရှေးခယျြထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဘတျသျဟာ ယောကျြားဖွဈသူ ကိုယျ့ကိုယျကိုသကွေောငျးကွံသှားပွီးတဲ့နောကျမှာ ယောကျြားဖွဈသူကိုယျတိုငျဆောကျပေးခဲ့တဲ့အိမျကွီးမှာတဈယောကျတညျးကနျြရဈခဲ့ပါတယျ ဘတျသျဟာဘဝကိုတဈယောကျတညျးအားတငျးပွီးရှဆေ့ကျမယျလို့ဆုံးဖွတျထားပမေယျ့ တဈရကျမှာတော့အိမျကွီးမှာထူးဆနျးတာတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ တဈယောကျယောကျရှိနသေလိုခံစားရတဲ့အပွငျ ဘတျသျတဈယောကျထူးဆနျးတဲ့အိမျမကျတှပေါမကျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဘတျသျဟာခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ ဝိဉာဉျလို့ထငျလာပါတယျအိမျကွီးထဲမှာတကယျပဲ ဝိဉာဉျရှိနတောလား ဘတျသျထငျသလိုသူ့ရဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူ ဝိဉာဉျပဲလားဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ The Night House ဆိုတဲ့ horror ကားလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဘတ်သ်ဟာ ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးမှာတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် ဘတ်သ်ဟာဘဝကိုတစ်ယောက်တည်းအားတင်းပြီးရှေ့ဆက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် တစ်ရက်မှာတော့အိမ်ကြီးမှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် တစ်ယောက်ယောက်ရှိနေသလိုခံစားရတဲ့အပြင် ဘတ်သ်တစ်ယောက်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေပါမက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဘတ်သ်ဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဝိဉာဉ်လို့ထင်လာပါတယ်အိမ်ကြီးထဲမှာတကယ်ပဲ ဝိဉာဉ်ရှိနေတာလား ဘတ်သ်ထင်သလိုသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဝိဉာဉ်ပဲလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB,1.2GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 6.9/10 5,272 votes